डीआईजी नवराज सिलवालमाथि नै कारबाहीको ‘डण्डा’ ! लाग्यो यस्तो गम्भिर आरोप- Nawaraj Silwal – Complete Nepali News Portal
डीआईजी नवराज सिलवालमाथि नै कारबाहीको ‘डण्डा’ ! लाग्यो यस्तो गम्भिर आरोप- Nawaraj Silwal
April 20, 2017	4,392 Views Share
विवादास्पद डिआइजी नवराज सिलवालमाथि कारबाही हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा कार्यसम्पादन मुल्यांकन फाइल किर्ते गरेको अभियोगमा उनलाई कारबाही हुने भएको हो ।
विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिलवालमाथि छानबीन गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई छानबीन गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ स्रोतले भन्यो,‘उहाँले (कासमु) फाइल नै किर्ते गरेको देखियो ।’